Dhiyabhorosi Anogarepi? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuChile Myanmar Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Sezvo ane muviri usiri wenyama haaoneki. Asi hazvirevi kuti anogara mugomba remoto maanenge achipisa vanhu sezviri kuratidzwa pamufananidzo uri munyaya ino.
Kwekanguva, Satani Dhiyabhorosi aikwanisa kufamba pamadiro kudenga kusanganisira kuendawo pamberi paMwari pamwe chete nedzimwe ngirozi dzakatendeka. (Jobho 1:6) Asi Bhaibheri rakagara rataura kuti kwaizova ‘nehondo kudenga’ yaizoita kuti Satani adzingwe kudenga ‘okandirwa panyika.’ (Zvakazarurwa 12:7-9, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Nhoroondo yezviitiko zvinotaurwa muBhaibheri uye zviitiko zvenyika, zvose zviri zviviri zvinoratidza kuti hondo iyi yakatoitika. Iye zvino Dhiyabhorosi ari pano panyika haachakwanisi kudzokera kudenga.
Saka zvinoreva here kuti Dhiyabhorosi ane nzvimbo yake yaanogara panyika? Somuenzaniso, guta rekare rePegamo rainzi “chigaro choumambo chaSatani” uye “kuri kugara Satani.” (Zvakazarurwa 2:13) Kutaura zvazviri, mashoko aya anoratidza kudzika midzi kwaiva kwakaita kunamata Satani munzvimbo iyoyo. Bhaibheri rinoti Dhiyabhorosi anotonga “umambo hwose hwenyika inogarwa,” kuratidza kuti haana nzvimbo imwe chete yaanogara panyika.—Ruka 4:5, 6.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Dhiyabhorosi Anogarepi?